ढिकुरामा गठबन्धनको घरदैलो चुनावी कार्यक्रम जारी, कांग्रेसका ५ एजेण्डा यस्ता छन्
२०७९ वैशाख २५, आइतवार मा प्रकासित
ढिकुरा, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । भुमिकास्थान नगरपालिका वडा नम्बर-९, ढिकुरामा चुनावी माहोल तातेको छ। नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनले घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ भने नेकपा एमालेले घरदैलो गरिरहेको छ। दुवै दलले आ-आफ्नो घोंषणापत्र समेत जारी गरिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले केही अकर्षक र लोकप्रिय नारा अँघी सारेको छ । ‘सुशासनमा पहरेदारी’, ‘उज्यालो ढिकुरा’, ‘कोख देखी शोक सम्म’, ‘एक घर एक धारा’, ‘सडकमा चाँसो’ जस्ता विषयले जनतालाई आकर्षीत गरेको छ ।
१. ‘सुशासनको पहरेदारी’
ढिकुरामा विभिन्न अनुदान, कार्यक्रम, बजेट विनियोजन गर्दा जनसहभागिता नगराएको कुरा नौलो होईन। मापदण्ड विपरित वडाले आफ्ना र आफन्तलाई पोसेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भएका सुचना समयमा सुचना पार्टीमा नटाँस्दा र गोप्य राख्दा आफुहरुलाई वडामा कुनै सहयोग नभएको जनगुनासो छ। यसैबिचमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोंषणापत्रमा यि कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। वडा कार्यालयमा मात्र नभएर भुजेलपानी र डेभामा समेत सुचना पार्टीको विकास गरिने उल्लेख छ। साथै सञ्चार माध्यम बाट समेत सुचना प्रवाह गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। बजेट विनियोजन गर्दा वा अन्य कार्यक्रमहरु हुँदा जनतालाई सहभागि गराईने प्रतिबद्धता जनाईएको छ।
२. ‘उज्यालो ढिकुरा’
उज्यालो ढिकुरा कार्यक्रममा वडा भित्रका कम्तीमा १५ स्थानमा सोलार बत्ती वा स्ट्रिट लाईट जडान गर्ने उल्लेख छ। वडाको झेंस्के, सुरसिङ, चौतारा, सोलिनडाँडा, गैरागोठ, माईकाथाना, काफलबास, गौंचोर, रानिपोखरा, भुजेलपानी, सानडेभा, काफ्ले, रानिपोखरा, डेभा र सुवर्णखालमा पहिलो चरणमा सडकबत्ती जडान गरिने कांग्रेस सभापती तथा वडाध्यक्षका उम्मेद्वार तिर्थराज घिमिरेले बताए। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्यत्र पनी थपिदै जाने उनको भनाई छ। यो एजेण्डाले जनताको मन छोएको छ ‌।
३. ‘कोख देखी शोक सम्म’
कांग्रेसको यो एजेण्डाले सबैभन्दा प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। स्थानिय सरकार सबैको हो भन्ने अनुभुती हुने यो नाराले जनताको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। कोख देखी शोक सम्म भन्नाले जन्म भएदेखी मृत्यु भएसम्म स्थानिय सरकार साथमा छ भन्ने आभास दिलाउँछ । वडा भित्र कसैको जन्म हुन्छ भने त्यो परिवारले पोषणका लागी रु. २०००/- प्राप्त गर्नेछ। शिशु र आमाको पोषणको कमीले स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याईएको हो। यस्तै वडा भित्र कसैको देहावसन भएमा शोकमा परेका परिवारलाई किरिया खर्च बापत रु. ३०००/- उपलब्ध गराउने कांग्रेसले योजना अँघि सारेको छ।
४. ‘सडकमा चाँसो’
हिंउदमा सडकै सड़क बर्खामा सडक कता छ भन्नु पर्ने अवस्थामा कांग्रेसले सडकलाई विकासको मेरुदंडका रुपमा लिएको देखिन्छ। बर्षौंदेखी पछाडी परेको भुमिकास्थानकै गौरवको बाटो नरपानी-नुवाकोटको बाटो स्तरोन्नती गरी कालोपत्रे गर्ने योजना अँघि सारेको छ। यस्तै गच्छे भालुबाङ सडकलाई पनि कालोपत्रे गर्ने तथा शाखा सडकहरु लाई समेत ग्रावल गर्ने योजना रहेको छ।
५. ‘एक घर एक धारा’
यो योजनाले पनी जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ। पानीले दुख दिएको स्थान र पानी भर्न लाईन बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने योजना आएपछी यो एजेण्डामा पनी जनताको नजर परेको छ।
प्रतिज्ञा पत्रमा रहेका यि ५ ओटा बुदालाई नागरिकले अत्यन्त मन पराएका छन्। यसका अलावा खर र ढुंगाका छानो विस्थापन गरी टिन लगाउने, चप्पल उद्योग, अचार उद्योग लगायतका उद्योग स्थापना, पशु बिमामा ५० प्रतिशत छुट, गरिब विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेस, कपी-किताब उपलब्ध गराउने, निशुल्क स्वास्थ शिविर लगायतका एजेण्डा पनी जनताले मन पराएका छन्।
खेलमैदान, बाल उद्यान, सेल्फी जोन, सार्वजनिक खानेपानीका धारा, हाट बजार संञ्चालन जस्ता विषय पनी कांग्रेसले जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ ।